Semalt बाट दिशानिर्देश: कसरी क्रेडिट कार्ड धोखाबाट आफूलाई जोगाउने
क्रेडिट कार्ड धोखाधडी र अन्य प्रकारका प्राविधिक चोरीलाई रोक्न अधिकारीहरू र एजेन्सीहरूको प्रयासलाई सराहना गरियो भने, क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईंले थाहा पाउनु पर्छ कि तपाईंको क्रेडिट कार्डको सुरक्षा तपाईंबाट सुरु हुन्छ। यस अपराधको बिरूद्ध तपाईंको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण ढाल भनेको यसलाई कसरी गरिन्छ भन्ने बारे जानकारी हो। यसको मतलब अपराधीहरूले प्रयोग गर्ने घोटालाहरूका प्रकारहरू र सचेतका लागि संकेतहरू बारे सचेत हुनु हो।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक लिसा मिशेलले केहि उपयोगी जानकारी तयार गरेका छन् जुन तपाईंलाई क्रेडिट कार्ड फ्रडबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।
क्रेडिट कार्ड फ्रड तीन मुख्य तरिकाहरू प्रयोग गरी गरिन्छ:
१. आपराधिक क्रेडिट कार्ड समात्छ: पिकपकेटहरू र अनुभवी चोरहरूले विचलन चोरी वा अधिक विवादास्पद दृष्टिकोणहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् उनीहरूको हातमा कार्ड छ। कहिलेकाँही, गलत हातले प्रि-स्वीकृत कार्डको साथ सम्पर्क गर्न सक्दछ। तिनीहरूले यसलाई मेल बक्स, रद्दीटोकरी बिनबाट वा जहाँसुकैबाट पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। तिनीहरूको हातमा कार्ड र हाम्रो धेरै जानकारी उदार ईन्टरनेटको साथ, अकल्पनीय पनि सम्भव छ।
२. क्रेडिट कार्ड स्किमरहरू: तपाइँको क्रेडिट कार्डको विवरणहरूको साथ, एक अपराधीले कार्ड क्लोन गर्न सक्दछ वा जानकारीलाई दुर्भावपुर्ण प्रयोग गर्न सक्दछ। कार्ड स्किमरहरूको बारेमा चर्चा एकदम चर्को विषय हो जब पनि क्रेडिट कार्ड फ्रडमा छलफल हुन्छ। स्किमरहरू क्रेडिट कार्डको विवरणहरू पढ्न र रेकर्ड गर्दछन्। अधिक अक्सर क्रेडिट कार्ड स्किमरहरू क्यास मेशिनमा प्रयोग गरिन्छ र क्यामेराको साथ हुन्छ। केही मिनेटमा, कार्ड प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ र पैसा लिन सकिन्छ।
Store. स्टोर, ग्यास स्टेशन, रेष्टुरेन्ट, वा अन्य कुनै स्थानमा बेइमान कामदारहरूले तपाईंको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दा क्रेडिट कार्ड विवरण पढ्न सक्छ र क्रेडिट कार्ड धोखाधडी गर्न वायरलेस टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ।
तपाईंले बुझ्नुभयो कि क्रेडिट कार्ड जालसाजीहरूले चोरी गरेको कार्डहरू त्यस्तो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्दैनन् जसले तिनीहरूको स्थान वा पहिचान खुलासा गर्दछ। तिनीहरूले अमेजनमा सामानहरू किन्न सक्दैनन्, उदाहरणका लागि, र तिनीहरूलाई उनीहरूको घरमा पठाइयो। तब एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा हुन्छ: तिनीहरूले गैरकानूनी सञ्चालनबाट कसरी वास्तविक पैसा प्राप्त गर्ने?
अधिकांश नवीन क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ीहरूले सफा नगद पाउनको लागि तिनीहरूको अपरेशनमा एउटा निर्दोष पार्टीलाई शामिल गर्दछ। तिनीहरू ई-वाणिज्य साइटमा एक लोकप्रिय आइटम को लागी एक विज्ञापन पोस्ट गर्न सक्दछ। अपराधीसँग वास्तवमै यो वस्तु हुँदैन, तर जब एक निर्दोष अनलाइन शपरले यसलाई खरीद गर्दछ, अपराधी घुमाउँछ र त्यहि वस्तुलाई एक अनलाइन स्टोरबाट किनिएको सीसी नम्बरहरूको साथ खरीद गर्दछ। S / he त्यसपछि निर्दोष खरीददारको ठेगाना शिपिंग गन्तव्य को रूप मा राख्छ। त्यसो भए, उसले पसलहरूलाई सिधा खरीददारलाई उत्पादन पठाउँदछ, तर उसले पैसा पाउँछ र कुनै पनि तरिकाले खर्च गर्न सक्दछ।
क्रेडिट कार्ड धोकाबाट सुरक्षित रहन तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईले कुनै रेष्टुरेन्ट, किराना स्टोर, तपाईको दन्त चिकित्सक, ग्यास पम्प वा अन्य ठाउँमा क्रेडिट कार्डको साथ भुक्तान गर्नुभयो। यो सर्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य छ कि क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्ने सबैभन्दा सुविधाजनक विधिहरू मध्ये एक हो। जहाँसम्म, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दा गल्ती भयो भने कतै लुकिरहेको खतरा हुन सक्छ, जस्तै लेनदेन पछि क्रेडिट कार्ड रसिद छनौट बिर्सनु, वा जब गैरजिम्मेवारपूर्ण हातले कार्ड समात्यो।
क्रेडिट कार्ड फ्रडबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने बारे यहाँ केहि उपयोगी सल्लाहहरू छन्:
तपाइँको जानकारी अनलाइन गार्ड गर्नुहोस्
तपाइँको क्रेडिट कार्ड जानकारी दिन बेवास्ता गर्नुहोस्
तपाईंको क्रेडिट कार्ड र बैंक स्टेटमेन्टहरू निरीक्षण गर्नुहोस्
वित्तीय संस्था र हुलाक कार्यालयको साथ तपाईंको पत्राचार ठेगाना प्रमाणित गर्नुहोस्
तपाइँको जानकारी धेरै आँखामा खुलासाको संभावनाहरु लाई कम गर्न को लागी संवेदनशील कागजातहरु
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण टिप भनेको तपाईको जानकारी अनलाईनमा सुरक्षित राख्नु हो। वेबमा लाखौं स्क्यामरहरू र जालसाजीहरू छन् शिकारको लागि निःशुल्क पैसा खोज्दै। कसले तपाईलाई आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी अनलाइन दिनुहोस् तपाईको विवेकमा छ, तर त्यसो गर्नुबाट जोगिनको लागि तपाईको सर्वोत्तम प्रयास गर्न सुरक्षित छ, विशेष गरी तपाईको क्रेडिट कार्ड जानकारीका लागि।